PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-08-27 - Uhlekisa esebezisa opopayi usomahlaya
Uhlekisa esebezisa opopayi usomahlaya
Isolezwe ngeSonto - 2017-08-27 - EZOKUNGCEBELEKA - THOKOZANI NDLOVU
UKUNGABIKHONA kwabantu abamnyama abaqhulula amahlaya besebenzisa opopayi, kugqugquzele usomahlaya uChik Aljoy (21) ongowokuzalwa KwaBulawayo eZimbambwe, ukuthi aqhamuke nalesi sitayela esibizwa ngeVentriloquism.
UChik osezinze eNingizimu Afrika, useke washiyelana inkundla nosomahlaya abaziwayo kuleli njengoSimphiwe Shembe, Felix Hlophe, Tol Ass Mo, nabanye.
Uthe ufike eNingizimu Afrika ngokungemthetho ngo-2011 ezoqhubeka nokufunda.
“Ngilethwe umalume, ngafike ngahlala eGoli. Ngiqhubeke nokufunda ngenza u-grade 10. Angizange ngisafika ku-grade 12 ngenxa yokuthi umalume ubengasakwazi ukuqhubeka nokungikhokhela esikoleni. Ngibuyele eZimbabwe, ngaze ngabuya ngo-2014. Ngenxa yokuthi bengivele ngikhule ngithanda ezobuciko, ngifundele iDrama eHillbrow
Theatre. Ikhono lami
lokuba ngusomhlaya liqale ukuqapheleka lapho. Umuntu owangifaka emahlayeni uPule Skhothane,” kusho uChik.
Uthe ngenxa yokubona ukuthi baningi osomahlaya abenza into eyodwa, unqume ukuthi azifundise iVentriloquism ngoba abekho abantu abamnyama abenza lolu hlobo lwamahlaya.
Uthe noma ebukeka esengumpetha kulolu hlobo lwamahlaya, kodwa akakabi sezingeni afuna ukufika kulona, ngenxa yokuthi kulukhuni ukushaya lolu hlobo lwamahlaya.
Uthe uziqeqesha ngokuthi afunde ukuthi enziwa kanjani ngokufunda kwi-internet. Uzohamba efundisa ngalokhu ngokuba nomjikelezo ozoba sezifundazweni ezahlukene. Uthe lo mjikelezo awubiza nge-Illegally Funny Tour uzoqala eJoburg Theatre eGoli ngasekupheleni konyaka. Uzophinde uye emazweni ase-Afrika okuyiZimbabwe, Zambia, Namibia, Tanzanaia naseUganda.